राजपाले मलंगवाबाट जितको खाता खोल्यो • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
राजपाले मलंगवाबाट जितको खाता खोल्यो
रितिक अधिकारी/भदौ २८ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले मलंगवाबाट आफ्नो जितको खाता खोलेको छ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत सर्लाही सदर मलंगवा मुकाम वडा नम्बर ९ बाट राजपाले खाता खोलेको हो । मलंगवा नगरपालिका वडा नम्वर ९ मा दलित महिला सदस्यमा राजपाकी सिता देवी मेस्तर निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन अधिकृत सुर्यप्रसाद अधिकारीले बताए।
नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कुनै पनि राजनीतिक विकृतिको सम्बाहक भनेको नेपाली कांंग्रेस भएको दाबी गरेका छन् । चुनावप्रचार प्रसारका लागि सर्लाही पुग्नुभएका नेता नेपालले देशमा भ्रष्टाचार, अराजकता, तथा गलत प्रवृत्तिको प्रोत्साहन गर्ने कार्य काङ्ग्रेसले गरेको आरोप लगाए । नेता नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ५४ जनाको जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गरेर कानुनको उपहास गरेको पनि जिकिर गरे ।
नेता नेपालले २ नम्बर प्रदेशमा पनि एमालेलाई पहिलो पार्टी बन्ने कसैले रोक्न नसक्ने उल्लेख गरे । तराईमा पहाडविवरोधी भावना भड्काउने खेल भइरहेको बताउँदै नेता नेपालले रातको समयमा जनतालाई भिडियो देखाएर जनभावना भड्काउने काम भरहेको दाबी गरे।
सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने खेल भइरहँदा समेत निर्वाचन आयोग चुप रहेको भन्दै नेता नेपालले आपत्ति जनाएका छन् । तराई–मधेसका जनताको हरेक दुःख सुखको सारथी नेकपा एमाले मात्र भएको उनको भनाई छ । देशको चौतर्फी विकास एमालेकै कारण भएको समेत नेपालले बताए ।